ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်ကနေ လိမ်လည်လှည့်ဖြား၊ အလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်တားဆီးရေးအက်ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦတွေရဲ့ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာနဲ့ စံနစ်တွေ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် Cyber တိုက်ခိုက်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ မည်သူ့ ကိုမဆို အမည်နဲ့ နေထိုင်ရာ လိပ်စာ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရတရပ်ရဲ့ ထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားတာဖြစ်စေ၊ သတင်းပေးနိုင်သူကို ဆုငွေဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထိ ချီးမြင့်မယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တရားမျှတရေးအတွက် ဆုငွေထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ကနေ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Cyber အင်တာနက်ကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦကို တိုက်ခိုက်မှုအချို့ဟာ CFAA လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်ကနေ လိမ်လည်လှည့်ဖြား၊ အလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်တားဆီးရေးအက်ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ရာကျပါတယ်။
ကွန်ပြူတာစံနစ်ကို ဖေါက်ထွင်းပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်လို့မရအောင် ထိန်းချုပ်၊ ငွေညှစ် အကျပ်ကိုင်တာ၊ အသုံးပြုခွင့်မရှိဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိုးဖေါက်တာ၊ ကာကွယ်ရေးစံနစ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သတင်းအချက်အလက်တွေ ခိုးယူတာ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို နှောက်ယှက်တာ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ လျှို့ဝှက်သင်ကေတတွေ၊ ညွှန်ကြားချက်တွေ ဖေါက်ထွင်းယူတာတွေဟာ CFAA ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးစံနစ် နည်းပညာထည့်သွင်းထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဘဏ်စံနစ်တွေမှာဘဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားပြည်နယ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေမှာပါ စံနစ်တကျ ကာကွယ်ထားတာပါ။
သတင်းပေးသူရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် RFJ ခေါ်The Rewards for Justice တရားမျှတရေးအတွက် ဆုငွေထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ကို Dark Web Tor-based tips မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ အဂ်လိပ်အက်ခရာတွေ ၅၆ လုံး ရောထားတဲ့စာတမ်းနောက်မှာ .onion လို့ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဆုငွေပေးရေး မြန်ဆန်ထိရောက်အောင် RFJ အစီအစဉ်က တခြားဌာနဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ သတင်းတွေဖလှယ်သလို၊ ဆုငွေကို နေရာဒေသမရွေး ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆုငွေကို Cryptocurrency ခေါ် Bitcoin တွေနဲ့လည်း ထုတ်ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တရားမျှတရေးအတွက် ဆုငွေထုတ်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်ကစတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပြီး ဥပဒေချိးဖေါက်သူတွေကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်အောင် ကူညီသတင်းပေးခဲ့သူ၊ သို့မဟုတ်၊ အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးထိပါးမယ့် အန်တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ သတင်းပေးသူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော် ဆုငွေချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ RFJ ရဲ့ Twitter လိပ်စာ https://twitter.com/RFJ_USA.
နောက်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားက Cyber အင်တာနက်ကနေ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးပို့နိုင်တဲ့ RFJ ရဲ့ website လိပ်စာ www.rewardsforjustice.net.
ကျနော်တို့ရဲ့ အမှာစကားက ပြတ်သားပါတယ်။ Cyber ရာဇ၀တ်သားတွေကို အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ သူတို့ကို လက်ခံထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေက အရေးမယူလျင်တော့ ကျနော်တို့က အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Anotny Blinken ကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ကှနျပွူတာ အငျတာနကျကနေ လိမျလညျလှညျ့ဖွား၊ အလှဲသုံးစားမှု ကာကှယျတားဆီးရေးအကျဥပဒကေို ခြိုးဖေါကျပွီး၊ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခွခေံအဆောကျအဦတှရေဲ့ ကှနျပွူတာ နညျးပညာနဲ့ စံနဈတှေ အနှောကျအယှကျဖွဈအောငျ Cyber တိုကျခိုကျမှုမှာ ပါဝငျပတျသကျသူ မညျသူ့ ကိုမဆို အမညျနဲ့ နထေိုငျရာ လိပျစာ၊ သို့မဟုတျ နိုငျငံခွားအစိုးရတရပျရဲ့ ထိနျးခြုပျညှနျကွားတာဖွဈစေ၊ သတငျးပေးနိုငျသူကို ဆုငှဒေျေါလာ ၁၀ သနျးအထိ ခြီးမွငျ့မယျလို့ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ တရားမြှတရေးအတှကျ ဆုငှထေုတျတဲ့အစီအစဉျကနေ ကွညောခကျြထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။
Cyber အငျတာနကျကနေ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခွခေံအဆောကျအဦကို တိုကျခိုကျမှုအခြို့ဟာ CFAA လို့အတိုကောကျချေါတဲ့ ကှနျပွူတာ အငျတာနကျကနေ လိမျလညျလှညျ့ဖွား၊ အလှဲသုံးစားမှု ကာကှယျတားဆီးရေးအကျဥပဒကေို ခြိုးဖေါကျရာကပြါတယျ။
ကှနျပွူတာစံနဈကို ဖေါကျထှငျးပွီး အလုပျဆကျလုပျလို့မရအောငျ ထိနျးခြုပျ၊ ငှညှေဈ အကပျြကိုငျတာ၊ အသုံးပွုခှငျ့မရှိဘဲ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ထိုးဖေါကျတာ၊ ကာကှယျရေးစံနဈကို ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ခိုးယူတာ၊ လုပျငနျးလညျပတျမှုကို နှောကျယှကျတာ၊ သတငျးအခကျြအလကျ၊ လြှို့ဝှကျသငျကတေတှေ၊ ညှနျကွားခကျြတှေ ဖေါကျထှငျးယူတာတှဟော CFAA ဥပဒကေို ခြိုးဖေါကျတာဖွဈပါတယျ။
ကာကှယျရေးစံနဈ နညျးပညာထညျ့သှငျးထားတဲ့ ကှနျပွူတာတှဟော အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဘဏျစံနဈတှမှောဘဲ ရှိတာမဟုတျပါဘူး။ တခွားပွညျနယျတှေ၊ နိုငျငံခွားကူးသနျးရောငျးဝယျရေးနဲ့ ဆကျသှယျရေးတှမှောပါ စံနဈတကြ ကာကှယျထားတာပါ။
သတငျးပေးသူရဲ့ လုံခွုံရေးအတှကျ RFJ ချေါ The Rewards for Justice တရားမြှတရေးအတှကျ ဆုငှထေုတျတဲ့အစီအစဉျကို Dark Web Tor-based tips မှာ တငျပေးထားပါတယျ။ ကိနျးဂဏနျးတှနေဲ့ အဂျလိပျအကျခရာတှေ ၅၆ လုံး ရောထားတဲ့စာတမျးနောကျမှာ .onion လို့ဖျေါပွထားပါတယျ။ ဆုငှပေေးရေး မွနျဆနျထိရောကျအောငျ RFJ အစီအစဉျက တခွားဌာနဆိုငျရာ မိတျဖကျတှနေဲ့ သတငျးတှဖေလှယျသလို၊ ဆုငှကေို နရောဒသေမရှေး ထုတျပေးနိုငျဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ ဆုငှကေို Cryptocurrency ချေါ Bitcoin တှနေဲ့လညျး ထုတျပေးနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ တရားမြှတရေးအတှကျ ဆုငှထေုတျတဲ့ အစီအစဉျကို ၁၉၈၄ ခုနှဈကစတငျအကောငျအထညျဖျေါခဲ့ပွီး ဥပဒခြေိးဖေါကျသူတှကေို တရားဥပဒအေရ အရေးယူနိုငျအောငျ ကူညီသတငျးပေးခဲ့သူ၊ သို့မဟုတျ၊ အမရေိကနျအမြိုးသားလုံခွုံရေးထိပါးမယျ့ အနျတရာယျကို ကွိုတငျကာကှယျဖို့ သတငျးပေးသူပေါငျး ၁၀၀ ကြျောကို ဒျေါလာသနျး ၂၀၀ ကြျော ဆုငှခြေီးမွှငျ့ခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ RFJ ရဲ့ Twitter လိပျစာ https://twitter.com/RFJ_USA.
နောကျ၊ နိုငျငံရပျခွားက Cyber အငျတာနကျကနေ တိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ ပေးပို့နိုငျတဲ့ RFJ ရဲ့ website လိပျစာ www.rewardsforjustice.net.
ကနြျောတို့ရဲ့ အမှာစကားက ပွတျသားပါတယျ။ Cyber ရာဇဝတျသားတှကေို အရေးယူအပွဈပေးဖို့ သူတို့ကို လကျခံထားတဲ့ နိုငျငံတှမှော တာဝနျရှိပါတယျ။ အဲဒီနိုငျငံတှကေ အရေးမယူလငျြတော့ ကနြျောတို့က အရေးယူသှားမှာဖွဈပါတယျလို့ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Anotny Blinken ကပွောဆိုလိုကျကွောငျးပါခငျဗြား။